Blue Borax Jewels
Blue Borax Jewels sy ny Test Perad
Ampiasao ny fitsapana vita amin'ny labiera mba hanaovana hazo manga
Borao karana dia ampiasaina hamantarana metaly sasantsasany amin'ny fampiasana ny fitsapana. Manaova kofehy boribory manga boribory toy ny vatosoa madinika. Mitahiry ireo firavaka na ampiasaina mba handinihana ny lokon'ny manga amin'ny endriky ny kobalt.
Borax Bead Materials
labozia, gazy mandoro, na jiro toaka
Manaova moron-tsoavaly ny fehezan-koditra amin'ny volo mba hahazoana antoka fa madio amin'ny sisa amin'ny sisa. Ataovy ao anaty lelafo ny fehezanteny mba handoroana ny loto rehetra.
Atsofohy ny boribory matevina ao anaty boribory kely. Ny hafanana ao amin'ny loop dia tokony hameno borasy ampy tsara amin'ny fifandraisana mba hamelana anao hamorona borobory boribory kely. Atsaharo ny valopy miaraka amin'ny borax ao anaty lelafo mandra-pibanjina akanjo fotsy fotsy. Esory ny loaka amin'ny lelafo. Tsindrio ny loopingo amin'ny totozy iray mba hialana amin'ny boromba borax. Kitapo fotsy madio boribory izy io, izay azonao ampitahaina amin'ny mofomamy manga efa vitanao.
Ny fanaovana mofomamy manga, na kofehy vita amin'ny sira metaly, dia manaraka ny dingana mitovy, afa-tsy ny tokony hampidirana ny metaly ao amin'ny kofehy. Mba hanamboarana kofehy manga, dia asio siramamy bitika kely ao anaty boribory. Azonao atao ny manaparitaka ny ranona cobalt mba hanosehana azy. Azonao atao ny manamboatra lavabato kely iray mba hahatratrarana izany.
Raha vantany vao mifangaro ny chloride sy ny borax cobalt, dia ario ny fefy matevina ary tsindrio ny fehezam-pitandremana mafana. Avereno amin'ny lelafo ny volombava vita amin'ny hoditra mba hamokarana jiro manga.
Tsindrio ny loopingo mba hanamaivana ny palokao mba hahafahanao mandinika azy. Raha toa ka mihazona ny volom-bava mankany amin'ny hazavana ianao, dia tokony hahita manga manga midorehitra. Raha mainty ny volonao dia nampiasanao ranona cobalt. Azonao atao ny mamerina indray ilay dingana amin'ny fampiasana kloridao borobavy borobavy kokoa. Ny loko manga dia mampiavaka ny metaly metaly ampiasaina amin'ny famokarana kofehy, izay cobalt.
Kanto be dia be
Andramo mampiasa salohim-bary hafa mba hamokarana volombava miloko:
Sulphate copper - varahina - manga maitso
sulfate ammonium ferre - vy - mavo na volomparasy volamena
manganese salts - violet
sotro vinaingitra - mavo
salady chromium - maitso maitso
Fanandramana labiera mba hamantarana metaly
Kafezy & Speeding Typing
Fanehoan-kevitry ny Chemistry High School
Ny fomba fanangonana Silver Polishing Dip
Silver Ornaments - Tetikasan'ny Chemistry
Ahoana ny fomba hanamboarana aviavy
Ahoana ny fomba hamokarana menaka oliva - Gastronomy Molecular
Recipe Powder Baking
Fomba roa hakana metaly zinc
Ahoana no fanaovana vy Violet na volomparasy mena
Fomba handrefesana lanjan'ny fampitomboana
Manaova Batterie Potato hanamora ny famantaranandro
Ahoana ny fametrahana sy ny fifehezana ny rakotra
Fianarana lehibe amin'ny Fihaonambe 12
Boky Children's Top 11 ho an'ny Andron'ny Mpifankatia
Norm Thagard: Ilay astronaut Amerikana izay lasa cosmonaut
Kitapo, vato, bits, ary bollards: Fiarovana ny sambonao
Ny vatsim-pianarana amin'ny kolontsaina amin'ny daty May
Review Quiz: Teny efa diso
Nahoana no nampiasaina ny molaly fa tsy ny lanjany?
Ahoana ny fampiasana sira mba hamoronana blaody amin'ny rano
Ceratopsians - Ny voaniho, Dinosaurs frilled
Inona avy ny olana atrehin'ny mpanao gazety ankehitriny?
Nahoana ianao no tokony hampidina ny kodiarin'ny ririnina?
Mpitarika ho an'ny Tour de la Paix
Ny fiakarana sy ny fahalavon'ny Rindrin'i Berlin
Fanofanana Paintball fototra
Hypallage amin'ny Gramama
Asa any am-pianarana ho an'ny mpianatra Sekoly Alahady
Sary fampisehoana manokana Gallery Gallery: Dada ao MoMA - Cologne
Mampiasa ny teny hoe "Donde" sy ny teny mifandraika amin'izany